Junior Account Female (2) Post
Account အတွေ့အကြုံ (1)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
LCCI 1,2 အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Microsoft Office ပိုင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။
Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. 316 total views,3today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ